bonega poker trano amin'ny alalan'ny napoli bari ba
ny filokana efi-trano taratasy vakio ny lalaon-teny
PAGCOR dia nanamafy izany rehefa nilaza fa "azo tendrena ho bidders dia tsy maintsy ho Filipiana olom-pirenena, na raha tsy izany fahefana araka ny lalàna." Mpampiasa vola hitily ny maro ao amin'ny fialam-Boly ny Tanàna dia tsy maintsy mahazo ny Filipiana mpiara-miasa na mamorona fikambanana izay mety ho 60 isan-jato ny fananan'ny mpiara-miasa eo an-toerana taolana trano rantsan-kazo manomboka ny filokana indray. – alalan ' ny tarika Sureste Fananana Inc bonega poker trano amin'ny alalan'ny napoli bari ba. Ny fialam-boly Tanàna efa Filipina valiny hifaninana lohany eo amin'ny lavitrisa dolara trano filokana any amin'ny manodidina any Makaô sy Singapour, ary koa ny ao Las Vegas sy Aostralia. – ny zo mba hitovy "ny avo indrindra mifanaraka asao ny fananana" satria ny casino mpandraharaha manana ny leasehold ny zon'olombelona.
Fanjakana regulator Filipina ny Voly sy ny Lalao Corporation (PAGCOR) dia mpanolo-tsaina roa entana ny tany tany Manila ny fialam-Boly Tanàna izay ny Solaire Resort sy ny Casino mijoro. Ao amin'ny voalohany 9 volana ny taona 2016, ny Filipina lalao orinasa dia mendrika P118 lavitrisa eo amin'ny lafiny lehibe lalao vola miditra (GGR).
Ny lalàm-panorenana mandrara ny vahiny avy mivantana hividy fananana ao amin'ny firenena. Fampiasam-bola amin'ny banky sary Nahazoan-Suisse kasaina fa ny firenena filokana orinasa dia mahazo GGR ny $6 lavitrisa (P297.35 miliara) amin'ny taona 2018, mety manao Filipina teo amin'izao tontolo izao ny top 4 casino fahefana ny taolana no ny trano rantsan-kazo filokana indray. Ny fanjakana mihazakazaka mafy dia nanome Solaire mpandraharaha Bloomberry Resorts Corp ny filokana efi-trano taratasy vakio ny lalaon-teny. Solaire ny lease tapitra tamin'ny 11 jolay, 2033, ary dia extendable ho an'ny hafa maharitra eo ambanin'ny toe-javatra sasany.